Vane Pump, fracturing Servo System, fracturing Oli Pump, Electric fracturing Pump - Vicks
Amandla ombane kancinci
Abt Series Servo Pump Single fracturing Pump
Asiyonto oyifunileyo? Kuthini nge...
Taft uqeqesho mvume ngexhanti kunye mvume e Melbourne kunye eQueensland, sinika LO udidi mvume ngexhanti, mvume ngexhanti udidi LF, uqeqesho ngexhanti yokuzihlaziya, izifundo ukhuseleko emsebenzini, iiklasi imveliso kunye noqeqesho induction. Kunye noqeqesho losuku lweveki okanye iiseshoni ngoMgqibelo ukuze uninzi izifundo zethu, sinako ukungena kuqeqesho ngeenxa kucwangciso lwakho.
Yonke imveliso kusekelwe ekuhlolweni ngamazwe, Easy ukuba ngani kunye iimpompo ubudala, iimveliso zethu kwizinga eliphezulu zidlule 4 engqongqo Ukuhlelwa uluntu yoqinisekiso ngexesha elifanayo.
inkxaso technology eyiyo liqela leengcali Ngamava natyebileyo edebugging inkqubo servo, Siyakuqinisekisa ukuxhasa iteknoloji ngamandla ukwenza iimveliso ezifanelekileyo kumatshini yoMthengi ngexesha.
Thina nikeza inkonzo yeeyure eziyi-24 emva kokuba-yokuthengisa ukusombulula ingxaki ngexesha. injineli wethu liya kubonelela ngoqeqesho ukunxibelelana ubuchwepheshe yakutshanje.
Ngenxa yamava ethu mboni kunye nabaqeqeshi ezivunyiweyo kunye abahloli, abasebenzi baya kufumana ithuba lokufunda nto intle ngelixa izakhono ezisebenzisekayo ezifunekayo ukuze bazive bekhululekile kuyo nayiphi meko.